Wararka Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Chelsea Oo Dalabka Ugu Danbeeyay U Direysa Jules Kounde, Bernardo Silva Oo Go'an Qaatay Iyo Qodobo Kale Xiiso Leh
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Chelsea oo Dalabka ugu Danbeeyay u direysa Jules Kounde, Bernardo Silva oo go’an qaatay iyo Qodobo kale Xiiso leh
Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Chelsea oo Dalabka ugu Danbeeyay u direysa Jules Kounde, Bernardo Silva oo go’an qaatay iyo Qodobo kale Xiiso leh
Xiddiga qadka dhexe ee reer England Jesse Lingard, oo 28 jir ah, ayaa diyaar u ah inuu ka tago Manchester United ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga haddii uusan rumeysan inuu si joogto ah ugu ciyaari doono kooxda Ole Gunnar Solskjaer xilli ciyaareedkan. (Thetimes)
Chelsea ayaa samaynaysa isku daygii ugu dambeeyay si ay Jules Kounde uga hesho Sevilla . Blues ayaa aad u xiiseyneysa inay la soo wareegto daafac dhexe oo tayo leh si ay ugu ciyaaraan qaab ciyaareedka Thomas Tuchel ee saddexda dambe ah. Sida laga soo xigtay AS
Liverpool ayaa isku diyaarineysa inay heshiis cusub u soo bandhigto weeraryahanka reer Masar Mohamed Salah, oo 29 jir ah, kaasoo noqon doona kan ugu qaalisan taariikhda kooxda. (TheAthletic )
Sheffield United ayaa xiiseyneysa inay amaah kula soo wareegto xiddiga garabka uga ciyaara Manchester United iyo Ivory Coast Amad Diallo oo 19 jir ah. (Sky Sports)
Weeraryahanka reer Poland Robert Lewandowski ayaa diyaar u ah inuu raadsado loolan cusub oo ka fog Bayern Munich. 32-sano jirkaan ayaa weli waxaa u harsan labo sano si uu u sii wato qandaraaskiisa kooxda heysata horyaalka Bundesliga. (Mirror)
Qiimaha Lewandowski ee ah £ 100m ayaa laga yaabaa inaysan ka hor istaagin Manchester City inay dalab ka gudbiso. Dhanka kale, bixitaanka weeraryahanka ayaa dhabar jab ku noqon doonta rajadii Manchester United ee ahayd inay la soo wareegto weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, maadaama uu noqon lahaa bedelka ugu habboon ee Bayern . (Express)
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Manchester City iyo xulka Portugal Bernardo Silva, oo 27 jir ah, ma doonayo inuu u dhaqaaqo Tottenham iyadoo qeyb ka ah heshiiska ay kula soo wareegeyso weeraryahanka reer England Harry Kane, oo 28 jir ah (Athletic)
Tababaraha Paris St-Germain Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu filayo in weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah, uu sii joogo kooxda xilli ciyaareedkan, inkastoo la isla dhexmarayo inuu u dhaqaaqayo Real Madrid. (Eurosport)
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadalo cusub la yeelatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Monaco Aurelien Tchouameni. 21 jirka reer France ayaa sidoo kale lala xiriirinayay Manchester United. (Express)
Chelsea ayaa qarka u saaran inay heshiis cusub u soo bandhigto 22 jirka daafaca uga ciyaara Ingariiska Trevoh Chalobah ka dib markii uu si cajiib ah ku bilowday xilli ciyaareedka. (Sky Sports)
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ku faraxsan inuu sii joogo Arsenal wixii ka dambeeya suuqa kala iibsiga xagaaga. Barcelona ayaa la sheegay inay xiiseyneysay saxiixa weeraryahanka reer Gabon laakiin 32 jirkaan ayaa doonaya inuu fuliyo hadafkiisa ah inuu noqdo halyeeyga Gunners. (Express)
Brighton ayaa wadahadalo kula jirta Benfica oo ku aadan inay 25 milyan ginni kula soo wareegto weeraryahanka reer Uruguay Darwin Nunez, 22. (Mail)
Tottenham , Leicester iyo Wolves ayaa xiiseynaya saxiixa PSV Eindhoven 19-jirka garabka uga ciyaara Ingariiska Noni Madueke. (Sky Sports)
Indha-indheeyayaasha Manchester United ayaa lagu arkay Portugal iyaga oo daawanaya PSV guuldaradii isreebreebka play-off-ka Champions League ee Benfica ee Estadio da Luz. (A Bola – Bortuqiis)
Scouts ka socda halkaasi Juventus , Bayern Munich , Roma iyo Atalanta ayaa sidoo kale joogay si ay u daawadaan da’yarka reer England. (Dailymail)
Watford ayaan helin wax dalab ah garabka reer Senegal Ismaila Sarr, 23, xagaagan waxayna weli ku adkeysaneysaa in ciyaaryahanka – oo lala xiriirinayo Liverpool – uusan iib ahayn. (Watford)
Madaxweynaha Fiorentina Rocco Commisso ayaa ku adkeysanaya inuusan dejin qiimaha uu ku doonayo bartilmaameedka Manchester City iyo Tottenham Dusan Vlahovic. Weeraryahanka 21-jirka ah ee reer Serbia ayaa durba soo jiitay dalab 70m euros ah oo kaga yimid kooxda heysata horyaalka Spain ee Atletico Madrid. ( insideFutbol)
Southampton ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo daafaca dambeedka midig ee kooxda Everton Thierry Small. 17 jirkaan ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Goodison Park iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya inuu iska diiday heshiis cusub oo uu u saxiixay kooxda Toffees. (Hampshire Live)
Barcelona ayaa 12.8 milyan oo ginni ku dooneysa 18 jirka qadka dhexe ee reer Spain Ilaix Moriba. Da’yarka ayaa soo jiitay xiisaha Wolves laakiin kooxda reer Catalan ayaan weli helin dalab la aqbali karo. (Molineux News)
Everton ayaa la xiriirtay Barcelona si ay wax uga weydiiso daafaca dhexe Samuel Umtiti, oo 27 jir ah, si ay ula soo saxiixato xiddiga reer France ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga 31ka Agoosto. (Goodison News)